Warshadda Sariirta Sariirteeda - Soo-saareyaasha Miiska Sariirta Shiinaha, Soo-saareyaasha
JF-H-214 Nightstands Locker Leather Miiska sariirta sariirta miiska sariirta oo leh kaydinta khaanada golaha wasiirada
Miyaad raadineysaa alaab guri si aad u dhammaystirto qurxinta gurigaaga si weyn? Haddii aad sameyso, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato qalabka casriga ah ee YIFAN. Qalabkan cajiibka ah ayaa runtii kuu soo bandhigi doona naqshadda gaarka ah ee cajiibka ah ee aad u bogaadisay. Waxaa jiri doona jawiga guridda ee aad ka heli karto qalabkan casriga ah ee casriga ah hubaal.
YF-H-213 Furniture Furniture Faux Leather Casriga Casriga ah
Qurux ahaan qaab ahaan isku shaandheyn: Miiskeena dhamaadka waa mid caan ka ah qurxinta iyo naqshadeeyayaasha maxaa yeelay waxaa lagu soo bandhigi karaa qol kasta, U isticmaal miiska qaxwada qolka fadhiga ama miiska dhinaceeda qolka soo dhaweynta.
YF-H-212 h Miisaska Sariiraha ee Gogosha La Dhigay oo leh Saldhig Biraha Dahabka Dahabka ah
Dharka jilicsan ee jilicsan iyo lugaha qoryaha ee xarrago leh ayaa ka dhigaya joogsiga Artis caweys wehel u ah sariirta dhinaceeda. Soo bandhigida qaab faahfaahsan, dhar tayo sare leh oo maqaar faux madow ah ayaa dhameystiraya muuqaalka qaab-dhismeedka sariirta cabbirka buuxa leh oo waara.
YF-H-210 Raaxo Casri ah oo Casri ah & Dahab 3 Qaanadleyda Qolka Jiifka ee Joogitaanka Jadwalka Miisaanka Sariirta
Uma baahnid inaad ku qarashgareyso tan lacag ah inaad qolkaaga jiifka u rogto meel quruxsan oo aad ku riyoonaysay, iyo meelaha lagu caweeyo habeenkii waa caddeyn. Haddii aad rabto hal khaanad ama saddex Naqshadeeye Naqshadaysan: Naqshad casri ah oo leh silsilad laba jibbaaran iyo midab cad oo dhalaalaya ayaa ku dareysa rafcaan qurux badan iyo taabasho casri ah qolkaaga jiifka.
Hayso vibes-yada casriga ah ee qurxinta aad ku dhex socoto miiska lahjadda dhinacan ah. Saldhigga macdanta ee macdanta ah wuxuu bixiyaa xasillooni wuxuuna abuuraa silhouette soo jiidasho leh, iyo marmarka sare ayaa dhameystiraya miiskan quruxda badan. Ku dheji qaybtan lahjadda leh weelka qurxinta, ku dhig hoosta farshaxanka derbiga casriga ah, ama u adeegso sidii miis shaqeynaya si aad u qurxiso qurxintaada.
YF-H-207 Meel Daawasho Casri ah oo dhalaalaya
Miiskan dhinaca raaxada leh ee gaarka ah wuxuu ku siinayaa lahjad qurux badan alaabta gurigaaga ugu weyn si uu u abuuro jawigaas casriga ah ee raaxada leh ee gurigaaga wuxuuna hagaajiyaa qurxinta ku hareeraysan.
YF-H-205 dhaldhalaalka sare 2 Khaanad jiifka habeenkii
Ku raaxayso kaydinta sariirta ee caqliga iyo casriga leh miiska sariirta sariirta ee Orson oo qoryo madow ah. Sidoo kale waxaa lagu heli karaa dhammeystir dabiici ah ama bunni ah oo u dhigma qolka jiifkaaga gudaha.
JF-H-204 Caddaan Dahab Dahab Ah Miiska Dhamaadka Habeenkii Casarka ee Casriga ah oo leh Khaanad
Awood Weyn: Laba khaanad wax soo saar iyo miiska miiska ayaa siiya qol ku filan baahiyahaaga.
YF-H-203-2 kor ayuu u qaadayaa dhinaca sare ee waxqabadka badan
Haddii aad raadineysid keydinta miiska qaxwada dheeriga ah, miiskan sare-sare-u-qaadista ee Nikka ayaa ku habboon. Qeybta casriga ah, casriga casriga ah kaliya maahan inaad badbaadiso meel bannaan, naqshadda la qabsiga waa mid waqti la'aan ah iyada oo la siinayo hawlo badan.